Bit By Bit - sasin-teny
About ny Author
Hividy ny boky
1 Sava lalana
1.1 An ranomainty tsiny
1.2 Tonga soa eto amin'ny nomerika taona
1.3 Research famolavolana
1.4 Themes amin'ity boky ity
1.5 Toro-hevitra momba ity boky ity
Inona no vakina manaraka
2 Ny fandinihana ny fitondran-tena
2.1 Sava lalana
2.2 Big tahirin-kevitra
2.3 Fahasamihafana mahazatra ny angona lehibe
2.3.4 Tsy feno
2.3.5 azo idirana
2.3.6 tsy filazana
2.4 Research paikady
2.4.1 Ny fisiana ara-zavatra
2.4.2 Forecasting sy nowcasting
2.4.3 Approximating fanandramana
3.1 Sava lalana
3.2 Mangataka andinin-teny
3.3 Ny fanadihadiana diso tanteraka rafitra
3.4 Iza no mba manontany
3.5 New fomba fametrahana fanontaniana
3.5.1 tontolo iainana vetivety fanombanana
3.5.2 Wiki fanadihadiana
3.6 Fanadihadiana mifandraika amin'ny loharano lehibe
3.6.1 Nangataka fangatahana
3.6.2 Mangataka fangatahana
4 Running fanandramana
4.1 Sava lalana
4.2 Inona no fanandramana?
4.3 roa lafiny ny andrana: laboratoara-saha sy ny Analog-Hafanàm-po
4.4 Moving mihoatra fanandramana tsotra
4.4.2 Heterogeneity ny fitsaboana vokatry
4.5 Ny fanaovana izany hitranga
4.5.1 Ampiasao ny tontolo misy anao
4.5.2 Manaova fanandramana manokana
4.5.3 ny vokatrao manokana
4.5.4 mpiara-miasa amin'ny mahery
4.6.1 Mamorona aotra miova vidiny tahirin-kevitra
4.6.2 Ataovy etika ny hevitrao: manolo, manadio, ary mihena
5 Fananganana fiaraha-miasa betsaka
5.1 Sava lalana
5.2.2 Vahoaka-Coding ny ara-politika fandaharan'asan'izy
5.3 Open antso
5.3.1 Netflix Loka
5.3.3 ataon'ny mpiara-to-patanty
5.4 Hozaraina fanangonana antontan'isa
5.5 Ny mandahatra anao manokana
5.5.1 Mandrisika mpandray anjara
5.5.3 mampifantoka ny saina
5.5.4 Enable tsy nampoizina
5.5.5 Aoka etika
5.5.6 Final famolavolana toro-hevitra
6.1 Sava lalana
6.2 telo ohatra
6.2.1 -pihetseham-po areti-mifindra
6.2.2 , fifandraisana, ary fotoana
6.3 Digital dia tsy mitovy
6.4 efatra fitsipika
6.4.1 Ny fanajana ny olona
6.4.4 Fanajana ny Lalàna sy ny Public Interest
6.5 roa etika rafitra
6.6 Areas ny fahasarotana
6.6.1 nilaza fanekena
6.6.2 fahatakarana sy Mpitantana fampahafantarana doza
6.6.4 hanapa-kevitra manoloana ny tsy fahazoana antoka
6.7 Fomba Soso-kevitra
6.7.1 Ny IRB dia gorodona, tsy nisy valindrihana
6.7.2 Ataovy ny tenanao eo amin'ny olon-drehetra ny kiraro
6.7.3 Eritrereto ny fikarohana fitsipika ho toy mitohy, tsy discrete
7 Ny ho avy
7.2 momba ny ho avy
7.2.1 Ny famenoana ny mofomamy sy ny fiompiana
7.2.2 mpandray anjara mifantoka fanangonana antontan'isa
7.2.3 Mifehy in fikarohana famolavolana
7.3 Miverina amin'ny voalohany
Anarana noforonin'ny ny solosaina. ×
Nanomboka tamin'ny taona 2005 tao anaty tranobe iray tao amin'ny University Columbia ity boky ity. Tamin'izany fotoana izany dia mpianatra mpianatra nahazo diplaoma aho, ary nihazakazaka fanandramana an-tserasera izay ho lasa fanadihadiana aho amin'ny farany. Hambarako aminareo ny momba ny ampahany ara-tsiansa amin'io fanandramana io ao amin'ny toko faha-4, fa izao kosa aho dia hilaza aminareo momba ny zavatra tsy ao anatin'ny dika mitovy na amin'ny taratasiko. Ary zavatra iray izay nanova tanteraka ny fomba fijeriko momba ny fikarohana. Indray maraina, rehefa tonga tao amin'ny biraon'ny lakozia aho, dia hitako fa nisy olona 100 avy any Brezila nandray anjara tamin'ny fanandramako. Izany zavatra tsotra izany dia nisy fiantraikany lalina teo amiko. Tamin'izany fotoana izany, nanana namana izay nitarika ny fanandramana nentim-paharazana aho, ary fantatro fa tena sarotra ny niasa mba hamerina, hanara-maso ary handoavana ny olona handray anjara amin'ireo fanandramana ireo; Raha afaka mitarika olona 10 izy ireo ao anatin'ny iray andro, dia fandrosoana tsara izany. Na izany aza, tamin'ny alalan'ny fanandramako an-tserasera, olona 100 no nandray anjara raha natory aho . Ny fanaovana ny fikarohana raha mbola matory ianao dia mety ho tsara loatra raha te ho marina, saingy tsy izany. Ny fiovana eo amin'ny teknolojia-indrindra ny fifindrana avy amin'ny vanim-potoanan'ny taona an-dalàm-panorenana-dia midika fa afaka manangona sy mandinika ny angona sosialy isika amin'ny fomba vaovao. Ity boky ity dia momba ny fanaovana fikarohana ara-tsosialy amin'ny fomba vaovao.
Ity boky ity dia ho an'ireo mpahay siansa sosialy izay te-hanao siansa maromaro momba ny angona, ireo mpahay siansa momba ny angon-drakitra izay te hanao siansa sosialy bebe kokoa, ary izay rehetra liana amin'ny sehatra roa. Raha raisina hoe iza io boky io dia tsy tokony hilaza afa-tsy ny mpianatra sy ny mpampianatra ihany izy. Na dia miasa any amin'ny oniversite aza aho amin'izao fotoana izao (Princeton), niasa tamin'ny governemanta (tao amin'ny Bens of Census US) sy tao amin'ny orinasa teknika (tao amin'ny Microsoft Research) aho noho izany dia fantatro fa misy fikarohana maro be mitranga ivelan'ny anjerimanontolo. Raha mieritreritra izay ataonao ianao amin'ny fikarohana ara-tsosialy, dia ity boky ity dia ho anao, na aiza na aiza misy anao, na karazana teknika ampiasainao amin'izao fotoana izao.
Mety ho efa voamarikao angamba izany, ny fahasamihafana amin'io boky io dia tsy mitovy amin'ny boky academic hafa. Izany dia ny fikasana. Ity boky ity dia nivoaka tamin'ny seminera fianarana momba ny siansa sosialy izay nampianariko tao Princeton tao amin'ny departemantan'ny sosiolojia nanomboka tamin'ny taona 2007, ary tiako ny hanangona ny angovo sy ny fientanentanana avy amin'io seminera io. Ary indrindra indrindra, tiako ny hanana toetra telo ity boky ity: tiako ho manampy, hoavy-saina, ary manantena zavatra tsara.
Fanampiana : Ny tanjoko dia ny manoratra boky iray manampy anao. Noho izany, izaho dia hanoratra amin'ny fomba fanokafana, tsy ara-potoana, ary maneho endrika. Izany dia satria ny zavatra manan-danja indrindra tadiaviko dia fomba iray saintsainana momba ny fikarohana ara-tsosialy. Ary, ny zavatra niainako dia manoro hevitra fa ny fomba tsara indrindra hampitana izany fomba fisainana izany dia tsy ara-dalàna sy amin'ny ohatra maro. Ao amin'ny faran'ny fizarana tsirairay dia manana fizarana antsoina hoe "Inona no hamakiako manaraka" izay hanampy anao handroso amin'ny famakiana amin'ny antsipiriany sy ara-teknika amin'ny lohahevitra entiko. Amin'ny farany, manantena aho fa ity boky ity dia hanampy anao samy hanao fikarohana sy hanombanana ny fikarohana ny hafa.
Ny tanjona hoavy : Ity boky ity dia hanampy anao hanao fikarohana ara-tsosialy amin'ny fampiasana ireo rafitra nomerika misy ankehitriny sy ireo hohavaozina amin'ny ho avy. Nanomboka nanao izany karazana fikarohana izany aho tamin'ny taona 2004, ary nanomboka tamin'izay dia nahita fiovana maro aho, ary azoko antoka fa mandritra ny fizotran'ny asanao dia hahita fiovana maro koa ianao. Ny hafetsena hijanonana hatrany amin'ny fiovan'ny toetr'andro dia ny fialonana . Ohatra, ity dia tsy ho boky izay mampianatra anao ny fomba fampiasana ny API Twitter araka izay misy azy ankehitriny; Fa kosa, hampianatra anao ny fomba hianaranao avy amin'ny loharanom-baovao lehibe (toko 2). Ity dia tsy ho boky iray izay manome anao dingana isan-tsegondra ho an'ny fanandramana fanandramana amin'ny Amazon Mechanical Turk; Fa kosa, hampianatra anao ny fomba hanamboarana sy handinihana ireo fanandramana izay miankina amin'ny fotodrafitrasa nomerika dizitaly (toko 4). Amin'ny fampiasana abstraction, manantena aho fa ho boky tsy maharitra amin'ny foto-kevitra ara-potoana izany.
Optimistika : Samy hafa fiaviana sy tombontsoa ny vondrom-piarahamonin'ireo roa ireo, ny mpahay siansa sosialy sy ny mpahay siansa. Ankoatra ireo fahasamihafana ara-tsiansa mifandraika amin'ny siansa, izay resahiko ato anatin'ity boky ity, dia tsikaritro ihany koa fa ireo fikambanana roa ireo dia manana endrika samihafa. Matetika ny mpahay siansa momba ny data Matetika izy ireo no mahita ny vera rehefa feno. Ny mpahay siansa sosialy, etsy ankilany, dia somary mitsikera kokoa; Matetika izy ireo dia mahita ny vera toy ny antsasak'izay foana. Amin'ity boky ity dia hanapa-kevitra ny mpandalina siantifika aho. Noho izany, rehefa manolotra ohatra aho, dia hilaza aminareo izay tiako momba ireo ohatra ireo aho. Ary, rehefa manondro olana amin'ny ohatra aho-ary hanao izany aho satria tsy misy ny fikarohana tonga lafatra -Izay manandrana maneho ireo olana ireo amin'ny fomba tsara sy tsara. Tsy dia manakiana loatra aho noho ny fanakianana ahy-Izaho dia ho mpitsikera mba hahafahako manampy anao hanangana fikarohana tsaratsara kokoa.
Mbola eo am-piandohan'ny fikarohana ara-tsosialy amin'izao vanim-potoana dizitaly izao isika, saingy nahita tsy fifankahazoan-kevitra izay mahazatra loatra aho fa manan-danja ho ahy ny miresaka aminy eto, ao amin'ny sasin-teny. Avy amin'ireo mpahay siansa momba ny angon-drakitra, dia nahita tsy fahazoan-kevitra roa iraisana aho. Ny voalohany dia mihevitra fa ny tahiry betsaka dia mamaha olana. Na izany aza, ho an'ny fikarohana ara-tsosialy, tsy mbola niaina izany aho. Raha ny marina, ho an'ny fikarohana ara-tsosialy, dia toa manampy betsaka kokoa ny angon-drakitra bebe kokoa-raha mifanohitra amin'ny antontam-baovao hafa. Ny fahadisoam-panantenana faharoa izay hitako tamin'ireo mpahay siansa dia mieritreritra fa ny siansa sosialy dia antokom-pihetseham-po miresaka momba ny fahatsapana mahazatra. Mazava ho azy, amin'ny maha mpahay siansa sosialista ahy-manokana amin'ny maha-sosiôlôgy -ko, tsy manaiky izany aho. Olona hendry no niasa mafy mba hahafantarana ny fihetsiky ny olombelona nandritra ny fotoana lava, ary toa tsy fahendrena ny tsy miraharaha ny fahendren'io ezaka io. Ny fanantenako dia ity boky ity dia hanolotra anao ny sasany amin'izany fahendrena izany amin'ny fomba mora mora takarina.
Avy amin'ireo mpahay siansa sosialy, nahita fahitana roa tsy fahazoan-kevitra ihany koa aho. Voalohany, nahita olona sasantsasany nanoratra ny hevitra manontolo momba ny fikarohana ara-tsosialy aho tamin'ny fampiasana ny fitaovana niomerika nandritra ny taona maromaro noho ny taratasy vitsivitsy. Raha mamaky ity boky ity ianao dia mety efa efa namaky andian-dahatsoratra izay mampiasa ny angona media sosialy amin'ny fomba mahazatra na diso (na roa). Manana ihany koa aho. Na dia izany aza dia mety ho fahadisoana lehibe ny mamintina amin'ireo ohatra ireo fa ratsy avokoa ny fikarohana ara-tsosialy dizitaly. Raha ny marina dia azo vakiana ihany koa ny andian-taratasy iray izay mampiasa ny angona fanadihadiana amin'ny fomba mahazatra na diso, saingy tsy manoratra ny fikarohana rehetra mampiasa ny fanadihadiana. Izany dia satria fantatrao fa misy fikarohana goavana atao amin'ny angona fanadihadiana, ary ato amin'ity boky ity dia hasehoko anao fa misy fikarohana goavana atao amin'ny fitaovan'ny dizitaly.
Ny tsy fahampian'ny fahita faharoa izay hitako tamin'ireo mpahay siansa sosialy dia ny fanakorontanana ny ankehitriny amin'ny ho avy. Rehefa mandinika ny fikarohana ara-tsosialy amin'ny vanim-potoana nomerika isika - ny fikarohana izay hoteneniko dia zava-dehibe ny hangatahantsika fanontaniana roa samihafa: "Manao ahoana izao fikarohana izany?" Ary " asa fikarohana amin'ny hoavy? "Nampiofanina ny mpikaroka mba hamaly ny fanontaniana voalohany, saingy ity boky ity dia mihevitra fa ny fanontaniana faharoa dia manan-danja kokoa. Na izany aza, na dia fikarohana ara-tsosialy amin'ny vanim-potoana nomerika aza mbola tsy namokatra goavam-be, paradigma manova ny hevitra ara-tsaina, dia tena haingana be ny fikarohana fikarohana momba ny taona. Izany fiovan'ny toetr'andro izany-mihoatra noho ny ambaratonga ankehitriny-izay mahatonga ny fikarohana dizitaly ho mahafinaritra ahy.
Na dia toa toa manolotra harena mety ho anao amin'ny fotoana tsy voafaritra ianao aza io andininy farany io, ny tanjoko dia tsy hivarotra anao amin'ny karazana fikarohana hafa. Tsy manana ny tenako manokana aho ao amin'ny Twitter, Facebook, Google, Microsoft, Apple, na any amin'ny orinasa teknika hafa (na dia noho ny famoahana tanteraka aza, tokony hilaza aho fa niasa, na nahazo fanampiana avy amin'ny Microsoft, Google, ary Facebook). Noho izany, ny tanjoko dia ny hijanona ho mpampita vaovao azo itokisana, milaza aminao ny zava-baovao rehetra mahavariana izay azo atao, raha toa ka mitarika anao hiala amin'ny fandrika vitsivitsy izay hitako tamin'ny hafa (ary indraindray mianjera ao amiko) .
Ny fanelanelanana ny siansa sosialy sy ny siansa momba ny angona dia indraindray antsoina hoe siansa sosialy. Ny sasany dia mihevitra azy ho sehatra ara-teknika, fa tsy boky ara-teknika amin'ny fomba nentim-paharazana izany. Ohatra, tsy misy fitoviana ao amin'ny lahatsoratra fototra. Nisafidy ny hanoratra ity boky ity aho satria te hanolotra fomba fijery feno momba ny fikarohana ara-tsosialy amin'ny vanim-potoana nomerika, anisan'izany ireo loharanom-baovao lehibe, fanadihadiana, fanandramana, fiaraha-miasa marobe ary etika. Tsy azo natao ny nanararaotra ireo lohahevitra rehetra ireo ary nanome antsipirihany ara-teknika momba ny tsirairay. Fa kosa, ireo mpanoro hevitra amin'ny fitaovana ara-teknika bebe kokoa dia nomena ao amin'ny fizarana "Inona no hamakiana manaraka" any amin'ny faran'ny toko tsirairay. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ity boky ity dia tsy natao hampianatra anao ny fomba fanaovana karajia manokana; Aleo anefa izy io hanova ny fomba eritreretinao momba ny fikarohana ara-tsosialy.
Ahoana ny fampiasana an'io boky io?
Araka ny nolazaiko teo aloha, ity boky ity dia navoaka avy amin'ny seminera fianarana momba ny siansa sosialy izay nampianariko hatramin'ny taona 2007 tany Princeton. Koa satria mety hieritreritra momba ny fampiasana ity boky ity hampianarana kilasy iray aho, dia nihevitra aho fa mety hanampy ahy ny hanazava ny fiantraikan'izany teo amin'ny fiainako sy ny fomba eritreretiko fa ampiasaina amin'ny fianarana hafa.
Nandritra ny taona maro dia nampianatra ny lalako aho tsy nisy boky; Manolotra lahatsoratra fanangonana fotsiny aho. Raha afaka mianatra avy amin'ireo lahatsoratra ireo ny mpianatra, ny lahatsoratra fotsiny dia tsy nitarika ny fanovana natao izay nantenaiko hamorona. Noho izany dia handany ny ankamaroan'ny fotoana ao am-pianarana aho, izay manome ny fomba fijery, ny fifandraisana, ary ny toro-hevitra mba hanampiana ireo mpianatra hahita ilay sary lehibe. Ity boky ity dia ny fanandramako hanoratra izay fomba fijery, tontoloko ary toro-hevitra amin'ny fomba izay tsy misy fepetra-amin'ny siansa sosialy na ny siansa momba ny angona.
Ao anatin 'ny fandaharam-pianarana semester iray, dia manoro hevitra aho ny hampiaraka ity boky ity miaraka amin' ny famakiana fanampiny fanampiny. Ohatra, ny fandaharam-pianarana toy izany dia mety handany herinandro roa amin'ny fanandramana, ary afaka miara-mijery ny toko faha 4 miaraka amin'ny famakiana ireo lohahevitra toy ny anjara andraikitra amin'ny fitsaboana amin'ny famolavolana sy fanadihadiana ny fanandramana; kaonty momba ny statistika sy ny mpampahalala vaovao natsangan'ny tetikasa A / B goavana amin'ny orinasa; fanorenana fanandramana manokana mifantoka amin'ny rafitra; ary olana ara-pitaovana, siantifika, ary etika mifandraika amin'ny fampiasana ny mpandray anjara avy amin'ny tsenan'ny mpiasa an-tserasera, toy ny Amazon Mechanical Turk. Azo atao koa ny miaraka amin'ny famakiana sy ny hetsika mifandraika amin'ny fandaharana. Ny safidy mety eo amin'ny mpivady maro dia mety hiankina amin'ny mpianatra eny an-dalana (ohatra: mpianatra, mpianatra, na PhD), ny fiaviany, ary ny tanjony.
Ny fandaharam-pianarana semester iray dia mety ahitana ny fametrahana olana isan-kerinandro. Ny fizarana tsirairay dia manana karazan-javatra isan-karazany izay aseho amin'ny alàlan'ny fahasahiranana: mora ( ), medium ( ), mafy ( ), ary tena mafy ( ). Ankoatr'izay, nanoratra ny olana tsirairay avy amin'ny fahaiza-manao ilaiko aho: math ( ), coding ( ), ary fanangonana tahiry ( ). Farany, nomarihako ny zavatra vitsivitsy izay tiako manokana ( ). Manantena aho fa ao anatin'izany karazana hetsika samihafa izany, dia hahita ny sasany izay mety amin'ny mpianatrao ianao.
Mba hanampiana ny olona hampiasa ity boky ity amin'ny sehatra, dia nanangona fitaovana fampianarana aho, toy ny sariohatra, fitohanana, fiarahabana voatokana ho an'ny toko tsirairay, ary vahaolana amin'ny asa sasany. Azonao atao ny mahita ireto fitaovana ireto-ary ampidiro aminy-ao amin'ny http://www.bitbybitbook.com.